MITAINTAINA NY MPAMPIASA LALANA : Sesilany ny lozam-pifamoivoizana miseho ao Sambava
Tsy voafehy ny lozam-pifamoivoizana ao an-tampon-tanànan’i Sambava ankehitriny satria saika isan’andro ny fisehoan’ izany any an-toerana. 8 mai 2018
Ny herinandro lasa teo dia lozam-pifamoivoizana efatra ary nifanesy no nitranga tao an-tampon-tanàna. Voalaza fa ny iray tamin’ireo dia namoizana ain’olona mihitsy fa ny sisa kosa naharatrana sy nahasimbana fiara sy moto ary bajaj. Toerana tsy mifanalavitra avokoa ireo nisehoana loza, tao Antaimby dia fiara 4x4 nifaoka bajaj ka naratra mafy ny mpamily sy mpandeha. Taorian’ny tao Antanifotsy dia mpiambina na Sécurité no maty teo no ho eo voadonan’ny fiara.
Ny zoma teo dia fiara nitondra olona avy nandevina no nidona tamin’ny kamiao, ka maro ny olona naratra. Ny harivan’ io indray dia fiara nirimorimo maika hanenjika eny amin’ny seranam-piaramanidina no nandona moto ary nifatratra tamin’ny tranon’ olona avy eo. Naratra mafy ny mpitondra kodiaran-droa, simba kosa ny lohan’ny fiara sy ilay moto. Noho ny tranga misy ao Sambava izany dia mitaky ny fandraisan’andraikitry ny mpitandro filaminana ny vahoaka sady miangavy ny fitandreman’ny mpamily tsirairay ihany koa.